Zava Véronique: « Hifarana ny gaboraraka » | NewsMada
Zava Véronique: « Hifarana ny gaboraraka »
“Heveriko fa hifarana hatreo ny fanaovana tsindry hazolena ny mpandraharaha ety anivon’ny faritra Analanjirofo sy fanaovana gaboraraka ny hetra aloan’ny mpandraharaha
kanefa lalana 1 kilometatra aza, tsy namboarian’ireo mpitondra teo aloha. Eo koa ny tsy fiarovana ny mpamboly sy mpanangom-bokatra, indrindra eo amin’ny seha-pihariana lavanila sy jirofo. Manantena izahay fa handry fahalemana miaraka amin’ny fandaharanasan’ny filoha Rajoelina amin’ny alalan’ny IEM. Mba hilamina ny fiainam-bahoaka, indrindra ireo tantsaha mpamokatra, nandry an-driran’antsy teo aloha“, hoy ny mpandraharaha Zava Véronique, ny herinandro teo tao Fenoarivo Atsinanana.
Madio tanana sy hiady amin’ny tsy rariny
Nambarany fa anisan’ny manohana ny vina IEM entina hampandrosoana ny firenena sy isam-paritra ny tenany. Nohamafisiny fa maha sarotiny azy ny tokony hiarovana ny fiainam-bahoaka, indrindra ireo tantsaha mpamokatra ka mila olona madio tanana sy vonona hiady amin’ny tsy rariny sy hitondra ny hetahetam-bahoaka ny distrikan’i Fenoarivo sy ny faritra Analanjirofo. “Hitondra tombontsoa ho an’ny vahoaka ny harena ambonin’ny tany sy anatin’ny tany ary ny an-dranomasina ao aminy. Ilàna olona afaka hiaro amin’ny fananan-tany ihany koa ny vahoaka hanafoanana ny fisolokiana tany etsy sy eroa tahaka nisy teo aloha. Efa hita taratra ihany amin’ny fanatsarana ataon’ny fitondrana amin’izao fotoana izao izany ary tena maha hentitra ny Praiminisitra Ntsay Christian”, hoy ihany izy.
Hifanome tanana amin’ny vina IEM
Notsiahiviny fa manana tanjaka amin’ny otrikarena ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana nefa mbola azo sokajina ho latsaka aorian’ny distrika maro manerana ny Nosy ka nanaovany antso avo hifanome tanana amin’ny fanatanterahana ny IEM. Tsiahivina fa anisan’ny mpandraharaha toekarena mamelona olona maro eo amin’ny seha-pihariana toy ny fambolena sy ny fikirakirana lavanila, hazandranomasina, letisia, ity renim-pianakaviana mpandraharaha ity. Nisafidy ny nangina teo aloha teo, saingy izao naneho hevitra izao indray.